Ihe Ọhụrụ E Bidoro Ime na Manhatan dị na Niu Yọk
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chol Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Finnish French Garifuna Georgian German Greek Hausa Hebrew Hindi Hungarian Igbo Indonesian Isoko Italian Japanese Kinyarwanda Kirundi Konkani (Roman) Korean Lithuanian Malagasy Malay Mam Maya Nahuatl (Central) Norwegian Nzema Otomi (Mezquital Valley) Persian Polish Portuguese Rarotongan Romanian Russian Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tarascan Totonac Tsonga Tzeltal Tzotzil Ukrainian Valencian Xhosa Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Ihe Ọhụrụ E Bidoro Ime na Manhatan
N’ọnwa Nọvemba afọ 2011, Ndịàmà Jehova ụfọdụ bidoro isi ụzọ ọhụrụ eme ka ndị bi n’ebe ndịda Manhatan nụ ozi ọma si na Baịbụl. Otú ha si eme ya bụ na ha na-edowe akwụkwọ anyị na tebụl na n’ihe ndị a na-akwagharị akwagharị mara mma otú ndị na-agafe agafe ga na-ahụ ya. Obodo a ha nọ na-eme ihe a bụ obodo kacha ekwo ekwo na Niu Yọk Siti. Ọ bụkwa ya bụ obodo mbụ e nwere na Niu Yọk Siti.
E nwere ógbè anọ a na-eme ihe a na Manhatan. N’ógbè nke ọ bụla, e nwere ọtụtụ ebe a na-edosacha akwụkwọ anyị otú ha ga na-adọrọ mmasị ndị na-agafe agafe ka ha nwee ike ịkwụsị were akwụkwọ ndị ha chọrọ. Onyeàmà Jehova na-ekwusa ozi ọma oge niile na-anọ ebe ahụ. Ebe ụfọdụ a na-edosa akwụkwọ ndị ahụ bụ ebe ọtụtụ puku mmadụ na-esi agafe kwa ụbọchị, nakwa ebe ndị na-eme njem na-anọ echere ụgbọ ga-ebu ha.
Ndị bịara n’ebe ndị ahụ e dosachara akwụkwọ anyị nwere ike ịnọ ebe ahụ mata azịza ọtụtụ ajụjụ ha nwere gbasara Baịbụl. Ndị ọ dị ngwa ngwa nwere ike iwere akwụkwọ nke ha gawa, e mechaa ha agụọ ya.
Akwụkwọ anyị ndị e dosachara ebe ndị ahụ dị n’ọtụtụ asụsụ. Ọ bụrụ na onye bịara ebe ahụ ahụghị akwụkwọ dị n’asụsụ ọ chọrọ, o nwere ike ikwu ka e wetara ya nke ọ chọrọ, a na-ewetakwara ya nke ahụ ọ chọrọ n’abalị ole na ole.
Ihe a Ndịàmà Jehova na-eme masịrị ọhaneze na ndị ọchịchị. Otu onye uwe ojii jụrụ ha ihe mere na ha emewebeghị ihe a kemgbe. O kwuru na ọ bụ ụdị ihe a ka ndị mmadụ chọrọ.”
Otu nwoke na-agafe agafe kwụsịrị n’ike mgbe ọ hụrụ akwụkwọ Gịnị n’Ezie Ka Bible Na-akụzi? Ọ sịrị na ya hụrụ ka ndị na-aga n’ụzọ ji akwụkwọ ahụ na-agụ, ya ana-eche ebe ha si nweta ya. Ugbu a, ọ hụla ebe ha si nweta ya.
E nwere otu nwoke na-esikarị n’ebe a na-edosa akwụkwọ ndị ahụ agafe kwa ụbọchị ma ọ gawa ọrụ. O mere ihe a ruo ihe dị ka otu ọnwa na izu abụọ n’akwụsịtụghị ka ọ mara ihe na-aganụ. Ma otu ụbọchị, ọ kwụsịrị gwa ndị na-enye akwụkwọ ndị ahụ na ya chọrọ enyemaka. Ndịàmà Jehova nọ ebe ahụ ji obi ụtọ nyere ya aka. Ha nyere ya Baịbụl ma gosi ya otú Baịbụl ga-esi abara ya uru.
E nweekwala ndị nwere mmasị kwụsịrịnụ ka e jiri Baịbụl nyere ha aka. N’otu ọnwa na-adịbeghị anya, e si n’ihe a a na-eme na Manhatan nye ndị mmadụ magazin dị puku atọ, narị asaa na iri itoolu na asaa, nyekwa ha akwụkwọ dị puku asaa, narị itoolu na iri asatọ na isii.
Vidio: Ihe Dị Mma Ileru Ya Anya
Vidio: Ndịàmà Jehova Nọ na Manhatan